यौन व्यवसायीको कमाइ कति र लगानी कहाँ ? — HamroBirgunj Dot Com
Home-Cover Story-यौन व्यवसायीको कमाइ कति र लगानी कहाँ ?
ग्लोबल फन्डले हालै गरेको आईबीबीएस (इन्टिग्रेटेड बायोलोजिकल एन्ड बिहेभियरल सर्भिलेन्स) सर्वेक्षणले नेपालमा २७ हजार यौनकर्मी महिला रहेको देखाएको छ, तर त्यसको दुई गुना बढी महिला यौन व्यवसायमा रहेको यौनकर्मी महिलाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था जागृति महिला महासंघको दाबी छ ।
पुरुष यौनकर्मीको संख्या पनि त्योभन्दा बढी रहेको महासंघको अनुमान छ । यौन व्यवसायीहरूको क्षेत्रमा कार्यरत महिला अगुवाहरूका अनुसार नेपालमा पाँच प्रकारका यौनकर्मी छन् । पहिलो श्रेणीका यौनकर्मी जो महँगा गाडी चढ्छन् र बाहिर कमै मात्र देखिन्छन् । उनीहरूका पार्टनर पनि उच्च ओहदाकै हुन्छन् । दोस्रो श्रेणीका यौन व्यवसायी जो सम्पर्कका आधारमा मात्र व्यवसाय गर्छन् । उनीहरू ठूल्ठूला होटलको सम्पर्कमा हुन्छन् । उनीहरू थोरै समयमा मनग्य कमाउँछन् । उनीहरूको कमाइ महिनामा एक लाखदेखि डेढ लाख आसपास हुन्छ ।
दशैंका दश दिन, यस्तो छ विशेषता
मनोरञ्जन क्षेत्रमा किशोरी: ‘थाहा पाए बेइज्जत’
जबरजस्ती बिहेविरुद्ध रिंकुको विद्रोह